”Waxaad haysataan 24 saac!” – Suudaan oo usii dhowaanaysa inay xiriir KHASAB ah la yeelato Israel (Laba farood oo loo taagey) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaad haysataan 24 saac!” – Suudaan oo usii dhowaanaysa inay xiriir KHASAB...
”Waxaad haysataan 24 saac!” – Suudaan oo usii dhowaanaysa inay xiriir KHASAB ah la yeelato Israel (Laba farood oo loo taagey)
(Kharduum) 16 Okt 2020 – Golaha isku dhafka ah ee ka taliya Suudaan ayaa la sheegayaa inuu guddoonsadey inuu xiriir rasmi ah la yagleelo dalka Israel, kaddib markii uu Maraykanku u qabtay 24-saacadood, sida uu faafifey hilinka Israeli-ga ah ee i24News.
Maraykanka ayaa la sheegayaa inuu Arbacadii u sheegay Golaha Suudaan in uu haysto 24-saacadood oo ay go’aan uga gaaraan inay xiriir qoor qabad ah la yeeshaan Israel si looga saaro liiska dalalka ”naas nuujiya argagixisada”, ama uu ka dhacayo xitaa waqtigii ay fursaddaa siin lahayd Washington.
Weli war ihi kama soo bixin dalka Suudaan sida uu faafinayo isla i24News.
Suudaan ayaa Maraykanka ugu jirta liiska madoow oo lagu daray horraantii 1990-meeyadii, kaddib markii uu MW la qallibey ee Omar al-Bashir uu marti geliyey hoggaankii Al Qaacida, Osama bin Laden. Waxaana la saaray cunaqabatayn culus.
In yar kahor tuuristiisa, waxaa Bashir la waydiistey inuu xiriir la yeesho Israel, taasoo uu ka dhaartay, iyadoo aanay labada dhinac marna wax xiriir ah oo rasmi ah abid, waloow ay Israel hadda xiriir la leedahay Koonfurta Suudaan oo go’day 2011.
Tan iyo markii ay Imaaraadku caddaysteen xiriir ay muddo dheer qarinayeen oo kala dhexeeya Israel, waxaa soo baxaysa in Maraykanku uu dalal badan oo Muslim ah ku dirqinayo inay xiriir la yeeshaan, waxaana ilaa iminka aqbalay dalka Baxrayn.
Previous articleCiidanka Azerbaijan oo soo ridey dayuurad Armenian ah (Hal degmo & 7 tuulo oo ay qabsadeen)
Next articleXog hor leh oo xanuun badan oo kasoo baxaysa gabar lagu silac-dileeyey bartamaha Qaahira (Dowladda oo bedeshey cinwaankii dembiga)